RASMI: Xiriirka kubadda cagta Asia oo xaqiijiyay in xulka qaranka Korea uu isaga baxay is-reeb-reebka koobka Adduunka – Gool FM
(Kuala Lumpur) 16 Maajo 2021. Xiriirka kubadda cagta qaarad weynta Asia ee lagu magucaabo The Asian Football Confederation (AFC) ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in xulka qaranka ee Waqooyiga Korea uu isaga baxay ciyaarista is-reeb-reebka tartanka Koobka Adduunka ee lagu qaban doono dalka Qatar sanadka 2022 iyo tartanka Asian Cup ee 2023 lagu qaban doono Shiinaha.
Xiriirka AFC ayaa u gudbin doono xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA go’aanka uu dalkaas kaga baxay is-reeb-reebkii socday iyo sida ay saameyneyso xulalka kula jira guruubkeeda.
Waqooyiga Korea oo horraan isaga baxay ciyaaraha Olimbikada ee lagu balansan yahay xagaagan sababo la xiriira Korona Fayras awgiis ayaa haatan fadhiya booska afaraad ee kala sarreynta Group H ciyaaraha is-reeb-reebka Koobka Adduunka.
Waxay haatan min siddeed dhibcood la wadaagtaa Lebanon iyo xulka aanan wali la garaacin ee Koonfurta Korea oo uu kulan u harsan yahay.
Turkmenistan ayaa hoggaanka u heysa Group H iyadoo leh sagaal dhibcood, halka xulka Sri Lanka uu yahay xulka aanan ilaa hadda gool dhalin dhibicna aanan helin.
Guud ahaan, kulammada is reeb-reebka Koobka Adduunka ee qaaradda Aasiya ayaa la jadwaleeyay in lasoo gaba-gabeeyo bisha November ee sanadkan 2021.